18th October 2019 – Myanmar Hot News
ပရိတ်​သတ်​ကြီး​ရေ ၀တ်​မှုန်​​ရွှေရည်​က​တော့ မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ ထိပ်​တန်းမင်းသမီးတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ပြီး အပြစ်​​ပြောရက်​စရာမရှိ​လောက်​​အောင်​ လှပလွန်းသူ​လေးဖြစ်​ပါတယ်​။အနုပညာပိုင်းမှာလဲ ​တော်​လွန်းတဲ့အတွက်​ ​အောင်​မြင်​မှုများစွာကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားသူပါ။ လက်​ရှိ ဘန်​​ကောက်​မှာ ​ကြော်​ငြာရိုက်​ကူးဖို့ သွား​ရောက်​ခဲ့ပါတယ်​။ဘန်​​ကောက်​မှာပွဲတက်​ခဲ့ပြီး သူမပွဲတက်​ခဲ့တဲ့ ဖက်​ရှင်​​လေးနဲ့ ​မြန်​မာလူမျိုးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ အလှကိုပြသခဲ့ပါတယ်​။ မြင်​သူတိုင်း​ငေး​မောရမယ့်​ သူမရဲ့ပုံ​လေး​တွေကို “Elegant is my kinda makeup I was born with. ကစ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေထဲမှာ အဖြူရောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိလားဗျို့။ မဆိုးဘူးနော်၊ ဒီကောင်မလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းသား !!!👌🏻😘”ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်​ရက်​မှာ ​သူမရဲ့ပုံး​လေး​တွေနဲ့ မျှ​ဝေ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ ကဲပရိတ်​သတ်​ကြီးလဲ ကစ်​​လေးအတွက်​ ဂုဏ်​ယူ​နေကြမယ်​လို့ ထင်​ပါတယ်​​နော်​… Credit , Wutt Hmone Shwe Yi’fb
Posted on 18th October 2019 18th October 2019 Author lkadmin Comment(0)
ဟာသ video​လေး​တွေနဲ့ လူမှုကွန်​ရက်​မှာ တဖြည်းဖြည်း နာမည်​ရကာ သွက်​သွက်​လတ်​လတ်​နဲ့ ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ ဖြူဖြူ​ထွေးဟာ ရိုးသားပွင့်​လင်းသူ​လေး တ်​​ယောက်​ပါ။ ယခုအခါမှာ ဖြူဖြူ​ထွေးဟာ ​ကြော်​ငြာ​တွေ music video​တွေနဲ့ ရုပ်​ရှင်​ကား​တွေ ကမ်းလှမ်းခံရသည်​ အထိ တဖြည်းဖြည်းပိုမို​အောင်​မြင်​လာသူတစ်​​ယောက်​ပါ။သူမရဲ့ မိဘ​တွေ အတွက်​လည်း အိမ်​​လေးတစ်​လုံးကို သူမရဲ့ အနုပညာ​ကြေး​လေး​တွေနဲ့ ​ဆောက်​လုပ်​​ပေးခဲ့ပါ​သေးတယ်​။ လက်ရှိမှ​​တော့ စိန်​နန်း​တော်​ပွဲကို တက်​​ရောက်​ခဲ့ပြီး အနက်​​ရောင်​ ဂါဝန်​​လေးနဲ့ အလွန်​ပင်​ချစ်​စရာ​ကောင်း​နေခဲ့တာပါ။ချစ်​ပရိတ်​သတ်​ကြီး အတွက်​သူမရဲ့ ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ ပုံ​လေး​တွေ မျှ​ဝေ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ Credit, Phyuphyuhtwe
​ပျော်​ရွှင်​စရာ အိမ်​​ထောင်​​ရေးကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားကြတဲ့ ​ရွှေနှစ်​​ရွှေစုံတွဲဟာ ​အောင်​မြင်​​မှု​တွေကိုယ်​စီနဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေ အားကျရတဲ့စုံတွဲတစ်​တွဖြစ်​ပါတယ်​။ ချစ်​ဇနီး ​ရွှေမှုံကိုအမြဲ အရိပ်​တကြည့်​ကြည့်​နဲ့ roဆန်​ဆန်​ချစ်​တတ်​တဲ့​ရွှေထူး တစ်​​ယောက်​ ယခုမှာလည်း ​ရွှေမှုံအတွက်​ ချိတ်​ထဘီ​တွေ လက်​မှာချိတ်​ပြီး ​ကိုယ်​တိုင်​​သေ​သေချာချာ ​ရွေး​ပေးပြီး roလိုက်​ပြန်​ပါတယ်​။ ဒီဇိုင်​နာ မျိုးမင်းစိုးကလည်း “မနက်​ဖြန်​ ​ရွှေမှုံဝတ်​မယ့်​ကြာဝတ်​စုံကို fittingလာချရင်း♡ ညမိုးချုပ်​ကြီးမှ ​ရွှေမှုံကို အချိတ်​​တွေ အများကြီးအများကြီး ၀ယ်​​ပေးသွားသော​​ ကို​ရွှေထူး♡♡ ဒီတခါ​ရွှေထူးကြိုက်​တာ ​ရွေး​ပေးသွားတာ​တွေသာ ယူသွား​သော​ရွှေမှူံ♡ အရမ်းချစ်​ကြတာ​တွေ့​တော့ ​ပျော်​မိတယ်​♡ ခုလို​ရွှေမှုံအတွက်​ ချိတ်​​တွေအများကြီး ၀ယ်​​ပေးတဲ့ ကို​ရွှေထူး ကျန်းမာချမ်းသာပါ​စေ♡ ​နောက်​လည်း အမြဲလာဝယ်​နိုင်​ပါ​စေ ♡”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်​ရက်​စာမျက်​နှာမှာ ​ရွှေနှစ်​​ရွှေရဲ့ပုံ​လေး​တွေနဲ့ တကွ​ဖော်​ပြ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ ကဲပရိတ်​သတ်​ကြီးလည်း ​ရွှေနှစ်​​ရွှေရဲ့ အချစ်​ကို အားကျရဲ့လား… Sources, Myo Min Soe’fb
၁၁လပိုင်းမှာ ရုံတင်​ပြသ​တော့မယ့်​ သူမပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ “​ကျော်​ကြားနဲ့ အ​မွှေစိန်​၀ိညာဉ်​”ရုပ်​ရှင်​ ဇာတ်​ကား​လေးကို အား​ပေးဖို့ ​တောင်းဆိုလိုက်​တဲ့ မင်းသမီး​ချော ခြူ​လေး
MRTV 4မင်းသမီး​လေးဖြစ်​တဲ့ ခြူး​လေး တစ်​​ယောက်​ဟာ ကျရာဇာတ်​ရုပ်​နဲ့ အပိုအလိုမရှိ​အံ့ဝင်​ခွင်​ကျ သရုပ်​​ဆောင်​နိုင်​တာ​ကြောင့်​ ပရိတ်​သတ်​အား​ပေးမှုအခိုင်​အမာရရှိထားတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး ဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ခြူး​လေးဟာ tiktokကစားတတ်​ပြီး ချစ်​စရာအမူအရာ​လေ​တွေလုပ်​တတ်​ တဲ့အတွက်​လည်း ပရိတ်​သတ်​​တွေအား​ပေးမှုကိုပိုမို ရရှိထားသူတစ်​ပါ။ ပရိတ်​သတ်​အခိုင်​အမာရရှိထားပြီးတဲ့ ​နောက်​မှာ​တော့ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​တွေသာ မက ရုပ်​ရှင်​ ဇာတ်​ကားကြီး​တွေမှာပါ ​ခေါင်း​ဆောင်​မင်းသမီး​အဖြစ်​ပါဝင်​နိုင်​​နေပြီဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ယခုအခါ သူမရဲ့လူမှု့ကွန်​ရက်​ စာမျက်​နှာမှာ သူမကိုယ်​တိုင်​ပါဝင်​ရိုက်​ကူးထားတဲ့ “​ကျော်​ကြားနဲ့ အ​မွှေစိန်​၀ိညာဉ်​”ဆိုတဲ့ဇာတ်​ကား​လေးဟာ ၁၁လပိုင်းမှာ ရုံတင်​ပြသ​တော့မှာ ဖြစ်​လို ပရိတ်​သတ်​များကို အား​ပေးဖို့​တောင်းဆိုထားပါတယ်​။ ကဲ ပရိတ်​သတ်​ကြီး​ရော ရုံတင်​ရင်​ အား​ပေးကြမှာလား…။ Source Chuechue
က​လေးတစ်​​ယောက်​လိုအပြစ်​ကင်းကာ ချစ်​ဖို့​ကောင်း​နေတဲ့ ခြူး​လေး
MRTV 4မင်းသမီး​လေးဖြစ်​တဲ့ ခြူး​လေး တစ်​​ယောက်​ဟာ ကျရာဇာတ်​ရုပ်​နဲ့ အပိုအလိုမရှိ​အံ့ဝင်​ခွင်​ကျ သရုပ်​​ဆောင်​နိုင်​တာ​ကြောင့်​ ပရိတ်​သတ်​အား​ပေးမှုအခိုင်​အမာရရှိထားတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး ဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ပရိတ်​သတ်​အခိုင်​အမာရရှိထားပြီးတဲ့ ​နောက်​မှာ​တော့ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​တွေသာ မက ရုပ်​ရှင်​ ဇာတ်​ကားကြီး​တွေမှာပါ ​ခေါင်း​ဆောင်​မင်းသမီး​အဖြစ်​ပါဝင်​နိုင်​​နေပြီဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ခြူး​လေးဟာ လတ်​တ​လောမှာ ​ကြော်​ငြာ​တွေ ပွဲတက်​​တွေနဲ့ မအားမလပ်​ရှိ​နေပြီး မကြာခနလည်း tiktokကစားတတ်​ပြီး ချစ်​စရာအမူအရာ​လေးတတွလုပ်​တတ်​ တဲ့သူ​လေးပါ။ ခြူး​လေးက​တော့ သူမရဲ့ ​ဖေ့စဘုတ်​မှာ က​လေး​လေး လိုချစ်​စရာ​ကောင်း​နေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံ​တွေတင်​ထားခဲ့ပါတယ်​။ အပျိုကြီးလုပ်​မယ်​ လူကြီးဆန်​​တော့မယ်​ ဆို​ပေမယ့်​လည်း ခြူး​လေးက​ အခုလိုကြည့်​​တော့လည်း ဆယ်​​ကျော်​သက်​​ပေါက်​စ​လေးလိုဘဲ​နော်​။ ခြူး​လေးရဲ့ ပရိတ်​သတ်​တွအတွက်​ခြူး​လေးရဲ့ ပုံ​လေးကိုပြန်​လည်​​ဖော်​ပြလိုက်​ပါတယ်​။ Source Chuechue
ပရိသတ်တွေ တစ်ခဲနက် အားပေးကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သံသာမိုးသိမ့်ကတော့”ကျွန်မကမဟေသီ” ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ အောင်မြင်လာသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဗီလိန်​ဇာတ်​ရုပ်​ဖြစ်​​ပေမယ့်​လို့ သရုပ်​​ဆောင်​ပညာ ​ကောင်းမွန်​လွန်​လို့ပရိတ်​သတ်​​တွေရဲ့ ချစ်​ခင်​အား​ပေးမှာကိုရရှိထားခဲ့တာဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ သံသာမိုးသိမ့်က လက်ရှိမှာလဲ မတူတဲ့ ဇာတ်​ရုပ်​နဲ့ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​တွေကို ရိုက်​ကူး​နေပြီး အနုပညာအလုပ်​​တွေကိုကြိုးစားလုပ်​​ကိုင်​​နေပါတယ်​။ မင်းသမီး​ချော​လေး သံသာမိုးသိမ့်​က​တော့ဒီ​နေ့မှာ အနုပညာရှင်​နဲ့ သူမရဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​ စိုးရိမ်​လို့ သူမကိုယ်​တိုင်​ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်​အပျက်​​လေးကို​ပြောပြထားပါတယ်​။ “ဒီနံပါတ်ကိုအနုပညာရှင်များသတိထားပါနော် သံသာဆီကိုဖုန်းဆက်ပြီး wave money က သီတင်းကျွတ် bonus ပေါက်လို့ ငွေ ၅၀၀၀၀ ထုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပါတယ် သူတို့ password ခြောက်လုံးပို့လိုက်ပါတယ် စစ်ပေးပါဆိုပြီး ပြောတော့ ကြည့်လိုက်တော့ fb reset code ဆိုပြီးmsg ဝင်လာပါတယ် မသိတဲ့သူများသာ ဒီဂဏန်းခြောက်လုံးပြောလိုက်ရင် acc hack ခံထိပါပီ သတိထားပါ ဘာမှမယုံပါနဲ့ […]
အဆိုတော် ယုန်လေးကတော့ ဂီတဘက်​ဆရာအနုပညာ ဘက်​မှာထူးချွန်​ပြီး ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​ အနုပညာကိုဘဝတစ်​ခုအ​နေနဲ့ ​ပေးဆပ်​ပြီး လုက်​ကိုင်​​နေသူဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။အဆို​တော်​ သရုပ်​​ဆောင်​ အပြင်​ ဒါရိုက်​တာ အလုပ်​ကိုပါ လုပ်​​ဆောင်​​နေပြီး အနုပညာ​သွေးကြီးသူလို့ဆိုရမှာပါ။ ယုန်​​လေးကအခုတစ်​အခါမှာ​တော့ သူရဲ့ fb accကို လာဟက်​ ခံရတဲ့အ​ကြောင့းနဲ့ လာဟက်​တဲ့ သူ့ကို သတိ​ပေးတာမြစ်​မှု​တွေ လုပ်​ထားခု့ပါတယ်​။ ယင်းဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ ” ကျွန်တော်အကောင့် ပြန်ရပါပြီ စိတ်ပူပေးကြတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Messenger ကနေဖုန်းနံပါတ် ဘယ်သူကိုမှမပေးပါနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ လူတန်းစားမခွဲခြားပဲ ဒီအတိုင်လာတောင်းတော့ ကိုယ်နဲ့ခင်လို့ ထားပါတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Wave Money ကနေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က Lock တွေမပေးပါနဲ့ ကျွန်တော်ကပိန်းဥပေါ့ထားပါတော့။အခုဟက်တဲ့ သူတွေ မင်းတို့ မနက်ဖြန်သဘက်ခါ ထောင်ထဲဝင်ဖို့ပြင်ထားပါ။မင်းတို့လာစမ်းနေတာ ဟုတ်လား။အိုခေ ကျေးဇူးပါ..အားလုံး Peace..” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ […]
အနီ​တောက်​​တောက်​ဝတ်​စုံ​လေးနဲ့ သူမတူ​အောင်​လှ​နေတဲ့ ​ဖွေး​ဖွေး
မင်းသမီး​ချော​လေး ​ဖွေး​ဖွေးက​တော့ ပရိတ်​သတ်​အခိုင်​အမာရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်​လက်​ဖြစ်ပြီး အမြို့အမြို့အနယ်​နယ်​ရှိပရိတ်​​သတ်ေ​တွရဲ့ အား​ပေးခြင်းကို ရ ရှိထားသူပါ။ အကယ်​ဒမီ ၃ ဆုကို ရရှိပိုင်​ဆိုင်​ထားပြီး လက်​ရှိမှာလည်း ပရိတ်​သတ်​အကြိုက်​ဖြစ်​​စေမယ့်​ ဇာတ်​​ကား​ကောင်းများစွာကို ရိုက်​ကူးထားပါ​သေးတယ်​။ မကြာ​သေးခင်​ကပင်​ ရိုမန့်​တစ်​ဆန်​တဲ့အချစ်ဇာတ်​ကား​လေးကို ​ဖွေးတစ်​​ယောက်​လက်​ခံထားပြီး မကြာခင်​ရိုက်ကူးပုံ​ဖော်​​တော့မှာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီ​နေ့မှာ​တော့ ဖွေးဖွေးကတော့ ပဲခူး ရွှေနန်းတော်ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သူမပုံရိပ်ကလေးတွေကို တင်​ထားခဲ့ပါ​သေးတယ်​။ ဖွေးဖွေး က ပဲခူးမြို့မှ ပြုလုပ်တဲ့ ရွှေနန်းတော်ပွဲမှာ အရမ်းကို လှပနေခဲ့တာပါ။ ပရိတ့သတ့​တွေအတွက်​ ​ဖွေး​ဖွေး ရဲ့ ဆိုင်​ဖွင့်​ပွဲက အလှပုံရိပ်​​လေး​တွေကို​ဖော်​ပြလိုက်​ပါတယ်​။ Source phwe phwe
​ခေး​လေးလို့ ပရိတ်​သတ်​​တွေ ချစ်​စနိုး​ခေါ်ရတဲ့ခင်​ဝင့်​ဝါ​လေးက​တော့ လက်​ရှိမှာ အနုပညာ အလုပ်​​တွေကိုမနားတမ်းလုပ်​ကိုင်​​နေပြီး ပရိတ်​သတ်​နဲ့ အဆက်​အသွယ်​မပြတ်​ရှိ​နေပါတယ်​။ မကြာ​သေးခင်​က ကျ​ရောက်​ခဲ့တဲ့ ​ခေး​လေးရဲ့ ​မွေး​နေ့ နဲ့ ပတ်​သတ်​ပြီး သူမရဲ့ အချစ်​​ရေးပို ပရိတ့သတ်​​တွေ စိတ်​ဝင်​တစားရှိခဲ့​ပေမယ့်​ ခင်​ဝင့်​ဝါက​တော့ လက်​ရှိအချိန်​ထိ အချစ်​​ရေးကို မစဉ်းစားဘဲ အလုပ်​​တွေကိုဘဲ ကြိုးစားလူပ်​​နေတာဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ခင့်​ဝင့်​ဝါဟာ ဒီ​နေ့မှာ​တော့ သူမရဲ့ ​ဖေ့စဘုတ်​မှာ “အကြင်​နာမြစ်​ဖျား” red carpet ​လေးကို တစ်​မှူထူးခြားကာ ဆွဲ​ဆောင်​မှု ရှိတဲ့ အပြင်​အဆင်​​လေး​တွေနဲ့ တက်​​ရောက်လာပါတယ်​။ ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​နတ်​သမီး​လေးလိုလှ​နေတဲ့ ခင်​ဝင့်​ဝါ ရဲ့ပုံ​လေး​တွေကို ပြန်​လည်​​ဖော်​ပြလိုက်​ပါတယ်​။ Source khin wint wah
သင်​ဇာဆိုတာနဲ့ ဆက်​ဆီကျကျနဲ့ အမြဲသွက်​သွက်​လက်​လက်​ ​နေတတ်​တဲ့ ​ကောင်​မ​လေး တစ်​​ယောက်​ဆိုတာပရိတ်​သတ်​​တွေသိကြမှာပါ။အမြဲလိုလိုလည်း ဖက်​ရှင်​အလန်းစား​တွေနဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေကြားထဲ ပွဲဆူ​စေသူလည်းဖြစ်​ပါတယ်​။ သင်​ဇာက​တော့ သူမရဲ့ အလှအပ​တွေကို ယုံကြည်​မှုရှိရှိနဲ့ ထုတ်​​ဖော်​တတ်​ပြီး ​ယောကျာ်း​လေးပရိတ်​သတ်​​တွေရဲ့ အား​ပေးမှုကို အထူးရရှိထားတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်​။ သင်​ဇာဟာ ​ခေတ်​ဆန်​ဆန်​နဲ့ အမြဲ တက်​ကြွ​နေတက်​ပြီး ဘာသာတရားကိုလည်း လိုက်​စားတဲ့သူလည်းဖြစ်​ပါတယ်​။ ဘာသာ​ရေးလည်းမြဲသလို အလှုအတန်းအ​ပေးအကမ်းမှာလည်း လက်​မတွန့်​သူဖြစ်​တာမို့အနုပညာရှင်​အချင်းချင်းကပါ ချီးကျူးရသူပါ။ အခုတစ်​ခါမှာလည်း ​သင်ဇာဝင့်ကျော်က“ရှမ်းချယ်ရီ ပညာရေး ပရဟိတ ဂေဟာ” လေးကိုသွားရောက်ပြီး အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ရှမ်းချယ်ရီ ပညာရေး ပရဟိတဂေဟာလေးဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးကို အဓိကထား ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ဂေဟာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာကတော့ “ရှမ်းချယ်ရီ ပညာရေး ပရဟိတ ဂေဟာ”က ကလေးတွေအတွက် ပညာဒါနအလှူငွေတွေကို သွားရောက်လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့၊ပါတယ်။​သင်ဇာက အခုလိုသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အတွက်”ရှမ်းချယ်ရီ ပညာရေး ပရဟိတ […]
Posted on 11th October 2019 11th October 2019 Author lkadmin